Ahoana no fomba ahafahako mifidy tranobemaila tsara indrindra amin'ny tranokala e-commerce?
Tsy ilaina ny milaza fa ny fananganana rohy dia mety ny asa sarotra indrindra amin'ny sehatry ny Search Engine Optimization. Amin'ny ankapobeny, manana rohy matanjaka izay manasongadina ny pejin'ny tranonkala ianao dia ny fahombiazan'ny fahombiazana amin'ny fananana toerana ambony ao Google. Ny zavatra dia tsy toy ny concept of SEO ao amin'ny pejy, tsy misy toro-làlana maneran-tany, lisitry ny to-do, na fitaovam-panorenana mahomby kokoa hanampiana anao hampisy fiantraikany tsara eo amin'ny sehatry ny tranonkalanao ary farany hivoatra eo an-tampony valin'ny fikarohana.
Midika izany fa ny fanatanterahana ny fananganana ny rohim-pifandraisana ankavanana dia tsy maintsy atao amin'ny fomba famoronana ihany. Tsy maintsy hanomboka hieritreritra ivelan'ny boaty ianao. Noho izany, tsy hohadinoina mihitsy ny fametahana rohy maromaro, satria ny antontan-taratasy manokana sy ny endriny manokana dia hampisy fahasamihafana amin'ny farany amin'ny famoahana ireo pejy e-commerce hitanao ary hijanona amin'ny fifaninanana karoka. Mazava ho azy, ny rindry vita amin'ny kalitao dia singa iray tsy dia lehibe loatra ihany amin'ny sariohatra Google malaza indrindra. Inona no dikan 'ny tranokala e-commerce anao? Eny, mbola hanana zavatra maro tokony hatao ianao, toy ny pejy fanatsarana ny tontolonao, ny vokatra sy ny sokajy SEO, ny fananganana ny tranokalan'ny tranokala, ary ny votoatiny tsy manam-paharoa. Saingy, raha jerena ny sehatry ny varotra e-commerce, manana toerana ambony ny sehatra fitadiavam-bola, tena zava-dehibe indrindra ho an'ny tetikasa manontolo. Nahoana? Satria noho ny fahazoana mivezivezy amin'ny tranokala bebe kokoa dia mila manana raki-pirahalahiana feno avy amin'ny rohy maro avy amin'ny sehatra maromaro manana fahefana avo.
Miverena any amin'ny teboka, andao hizaha ny tsara indrindra ny mpanamboatra bakalorea amin'ny fijerena ireo singa fototra amin'ny Internet amin'ny e-varotra an-tserasera. Anisan'ireo hafa, nanandrana ny tenako ho fitaovana fananganana rohy ho an'ny webshop aho: Ahrefs, Semalt Analyzer, ary Open Site Explorer avy amin'i Moz. Eto ambany eto dia hanana fijery fohy ho an'ny tsirairay amin'izy ireo aho.
Ahrefs dia mety tsara amin'ny fanatanterahana haingana ny fivarotana tranokala e-commerce. Ity fitaovana ity dia manambatra ny SEO sy ny fivarotana votoaty, mba hahatonga ny fiaraha-miombon'izy ireo hanompo ny fitomboan'ny isam-pikatrohana. Amin'ny fampiasana Ahrefs, dia tsy ho very ny lafiny rehetra amin'ny tetikasan-tranonkalanao manolotra anao ny tatitra feno amin'ny tifitra tapakila, miaraka amin'ny loharanon-kevitra rehetra izay mila fikandrana haingana, ary koa ny fijerena haingana ny fanairana amin'ny backlinks, fanamarihana ary teny fanalahidy.
Semalt Analyzer dia fitaovana fitaterana an-tserasera manerantany izay afaka manampy anao hahatakatra ny fomba tokony hitantanana ny backlinks anao ary hanitsy ny fomba fitondrany ho an'ny tombontsoa lehibe indrindra. Mazava ho azy, raha vaovao amin'ny indostrian'ny SEO ianao, ny sary iray manontolo dia mety ho sahiran-dava amin'ny fijerinao voalohany. Na izany aza dia tsy ilaina ny manahy. Raha jerena ny toetra tsara indrindra amin'ny mpanamboatra bakalorea, ny Semalt Analyzer dia mampiseho ny lafiny matanjaka indrindra amin'ny famakafakana ireo rakitra backlink amin'ny tranonkala rehetra (anisan'izany ny mpifaninana anao), ny faharetan'ny rindranasa tsirairay, ny fanaraha-maso amin'ny ankapobeny, ny famotopotorana ny endriky ny fanovana ary ny lisitry ny URL, ary ny fanomezana torohevitra mahasoa lahatsoratra ao anaty rakitra ho an'ny backlinks Source .